SIM Haitsigirwe Pane iPhone? Heino Kugadzirisa! - Payette Pamberi - Iphone
bata screen screen iphone 6 isiri kudaira
SIM Haitsigirwe Pane iPhone? Heino Kugadzirisa!
Iwe unongoisa SIM kadhi nyowani mu iPhone yako, asi chimwe chinhu hachisi kushanda mushe. Yako iPhone iri kukuudza kuti iyo SIM kadhi haina kutsigirwa. Muchikamu chino, ndichakuratidza kugadzirisa dambudziko racho parinoti 'SIM haina kutsigirwa' pane yako iPhone !
ndinofanira kubatidza wifi kufona
Sei iPhone Yangu SIM Isingatsigirwe?
An iPhone inowanzo taura kuti SIM haitsigirwe nekuti yako iPhone yakavharirwa kune anotakura. Izvi zvinoreva kuti haugone kuisa SIM kadhi kubva kune wakasiyana mutakuri kana iwe ukachinja.
Kuti utarise kana yako iPhone yakavharwa, vhura Zvirongwa uye tap Zvakajairika -> About -> Carrier Lock . Iyo yakavhurwa iPhone ichati Hapana SIM Zvirambidzo .
Kana iwe usingaone iyi sarudzo, kana kana ikataura chimwe chinhu, bata wako musina waya anotakura nezve kuvhura yako iPhone.
Kunyangwe mamiriro ezvinhu akatsanangurwa pamusoro angangoshanda kune vazhinji venyu, haashande kune wese munhu. Hazvigoneki, asi iwe unogona kunge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitya. Tevedza nhanho dziri pazasi kugadzirisa dambudziko.
Kutangazve yako iPhone ndiko kugadzirisa nekukurumidza kwemazhinji matambudziko esoftware. Nzira yekutangazve yako iPhone inosiyana zvichienderana nekuti ndeipi modhi yaunayo:
iPhones dzine Chiso ID : Panguva imwe chete pinda uye ubatisise zvese zviri bhatani remagetsi uye chero vhoriyamu bhatani kusvikira slide kumagetsi kudzima inowanikwa pachiratidziri. Svetera iro simba icon kubva kuruboshwe kuenda kurudyi mhiri kwechidzitiro kuti uvhare yako iPhone. Dhinda uye ubatise bhatani reparutivi zvakare kudzamara Apple logo yaonekwa pachiratidziro kuti uvhure yako iPhone zvakare.
iPhone isina Chiso ID : Dhinda uye ubatisise bhatani remagetsi , uye swipe iyo icon yemagetsi kuyera skrini pa slide kumagetsi kudzima rinoratidzika. Dhinda uye ubatise bhatani remagetsi zvakare kuti utangezve yako iPhone.
Tarisa uone An iOS Kugadziridza
Apple inowanzoburitsa matsva matsva eIOS kugadzirisa madiki mabugs uye kuburitsa maficha manyowani. Ipfungwa yakanaka kuchengetedza yako iPhone kusvika padanho zvakadaro, asi inogona zvakare kugadzirisa dambudziko iri.
Tinya Software Kwidziridzo .
Tinya Dhawunirodha uye Isa kana iOS yekuvandudza iripo. Enda padanho rinotevera kana yako iPhone yasvika parizvino.
Dzinga Uye Reinsert Iyo SIM Kadhi
Kutsvagisa SIM kadhi mune yako iPhone kunogona kugadzirisa akati wandei madiki madiki. Tarisa iyo SIM kadhi tireyi parutivi rwe iPhone yako.
Shandisa SIM kadhi ejector chishandiso kana yakatwasuka paperclip kuvhura tray. Dzorera tireyi kumashure kuti udzorere SIM kadhi.
Yese yako iPhone's Cellular, Wi-Fi, Bluetooth, uye VPN marongero anodzoreredzwa kune zvakasarudzika zvefekitori iwe paunogadzirisazve Network Zvirongwa. Ita shuwa yekunyora pasi ako eWi-Fi mapassword, sezvo iwe uchafanirwa kuapindazve iwo kana izvi reset zvapera. Iwe zvakare unofanirwa kubatanidzazve ako maBluetooth zvishandiso uye kugadzirisa zvakare chero ako maVPNs.
Nepo kuri kusagadzikana kudiki, kuseta patsva uku kunogona kugadzirisa dambudziko iri. Kugadziridza Network Zvirongwa:
Tinya Dzorera zvakare.
Tinya Dzorerazve Network Zvirongwa .
Iwe unogona kukurudzirwa kuisa yako passcode usati waita iyi reset.
ipad mini 2 isiri kuchaja
Kana nyaya yemaseru ikaitika pane yako iPhone, Apple uye yako isina waya inotakura inowanzo nongedzera munwe kune mumwe nemumwe. Ichokwadi ndechekuti panogona kunge paine nyaya ne iPhone yako kana account yako neako asina waya anotakura, uye hauzozive kusvikira iwe uchinge waonana nekutsigira kwavo kwevatengi.
Tarisa uone Apple webhusaiti kune tora rutsigiro online, mu-chitoro, parunhare, kana kuburikidza neyekurarama chat. Unogona kuwana nzvimbo yekutakura vatengi nekutakura zita ravo uye 'rutsigiro rwevatengi' muGoogle.
iPhone SIM Zvino Inotsigirwa!
Wakagadzirisa dambudziko uye iPhone yako iri kushanda zvakare. Inotevera nguva yako iPhone painoti 'SIM haina kutsigirwa', iwe unobva waziva chaizvo zvekuita. Siya chirevo pasi pazasi kana iwe uine chero mimwe mibvunzo!